Farmaajo oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Itoobiya u gacan geliyo saraakiil ka tirsan Jabahadda xoreynta dhulka Soomaali Galbeed. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Itoobiya u gacan geliyo...
Farmaajo oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Itoobiya u gacan geliyo saraakiil ka tirsan Jabahadda xoreynta dhulka Soomaali Galbeed.
Warar dheeri ah ayaa kasoo baxaya sarkaal ka tirsan jabhadda xoreynta Ogaadeeniya ee ONLF “Soomaali Galbeed” oo dhawaan ciidamada nabadsugida iyo sirdoonka qaranka kasoo qabteen magaalada Cadaado, kaasoo la geeyay magaalada Muqdisho, waxaana wararkii hore aan baahinay warar loo qaatay in sarkaalkaan oo lagu magacaabo C/Xakiin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) ay NISA ka badbaadineysay sirdoonka Itoobiya in Galmudug iyo ciidamo uu wwatay Jen. Galaal u gacan geliyaan Itoobiya.
Warar la xaqiijiyay ayaa sheegaya in Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo uu amar ku bixiyay in Qalbi Dhagax iyo sarkaal kale oo lala qabtay inuu amray isla markaana dowladda Itoobiya ay ka codsaday in loo soo gacan geliyo sidaasina uu ku dhacay howlgalka lagu soo qabtay loona gacan geliyo Itoobiya.
Taliyaha hay’adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka ee NISA, C/llaahi Maxamed Sanbalooshe iyo Safiirka Itoobiya ee Somalia Jamaaludiin Axmed ayaa u xilsaarnaa in lasoo qabto lana dhoofiyo Qalbi Dhagax oo ahaa Madaxii Xarunta Dhexe ee Ururka ONLF.
Heshiiskii uu horay usoo saxiixay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ee Addis Ababa ka dhacay bishii lasoo dhaafay oo maxaabiis fara badan uu kula soo wareegay ayaa qeyb ka ahaa in dowladda Itoobiya lagala shaqeeyo in loo soo gacan geliyo xubnaha ONLF ee ku sugan gudaha Somalia iyo cid kasta oo ay u aragto caddowgeeda, heshiiskaasi oo sida ay tahay u fulay.
Qalbi Dhagax ayaa diyaarad gaar ah looga qaaday Muqdisho, lana geeyay Baydhabo, halkaasi oo diyaarada milateri looga sii qaaday garoonka Baydhabo, waxaana la geeyay magaalada Godey, oo laga sii saaray Ethiopian Airlines, kana dejisay magaalada Nazaret oo ay ku taal xarunta ugu weyn ee Sirdoonka Itoobiya.
Waxaa horay usia raacay la-taliyaha Madaxweynaha Jubbalad Cabdi Cali Raage iyo Taliye kuxigeenka Nabadsugida Jubbaland Col. Gaas qorshaha soo qabashada wax badan kala socdeen.
Arrintaan ayaa shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu walaaceen in madaxweyne Farmaajo oo ay u arkayeen madaxweyne qaranimadii soo ifbaxaysay iyo rajadii laga qabay ay mugdi gelisay tallaabada cusub ee lagu ugaarsanaayo madaxda iyo xubnaha jabhada xoreynta dhulka Ogaadeeniya.
Somalia kama dhicin Madaxweyne Soomaaliyeed oo Itoobiya ku wareejiya sarkaal ka tirsan Itoobiya, hase ahaatee Farmaajo ayaa taariikh madow ku galay in dad Soomaaliyeed oo u dagaalamaya dhulkooda iyo gumeysi diid inuu u gacan geliyo Itoobiya.
HALKAN KA AKHRISO LINKGA WARBIXINTA WARGEYSKA ETHIOPIA OBSERVER KA QORAY: